Yugaandaan warreen 'homosexual' ta'an du'aan adaabuuf - BBC News Afaan Oromoo
Yugaandaan warreen 'homosexual' ta'an du'aan adaabuuf
Image copyright ISAAC KASAMANI
Mootummaan Yugaandaa seera warreen fedha qunnamtii saala walfakkaataa (homosexual) ta'aniifi waan kana jajjabeessuu keessatti hojjetan yakkamaa taasisuu fi haga du'aa adabsiisuu baasuuf.
Ministeerri Amala gaarii irratti hojjetu (ethics and integrity) seera namoota fedha qunnamtii saala walfakkaataa qabna jedhan yakkamtoota taasisu bara 2014 tti mannii murtii kuffise ammas deebi'ee seera ta'uu akka danda'u hojjechaa jira.
Ministirichi Simoon Lokoodoo Rooyitarsiif akka himanitti, wixineen kun seera ta'ee yoo bahu namoonni kunniin du'aan adabamu.
Loltoonni 'qaamakoo tokkollee hin hambifne'
Osaamaa Bilaadaniin argachuuf hakiima CIA gargaare
Seerri yakkaa keenya murtaahaadha. gocha sana qofa yakka taasisa. Kanneen beeksisaa fi namoota gara anatti filachuu keesatti hirmaatanis yakkamaa akka godhu barbaanna. Kanneen yakka guddaa raawwatan du'aan akka adabaman ta'a'' jedhan.
Fedhii qunnamtii saalaa saala walfakkaataa gidduutti ta'u ''Yugaandaa keessatti uumaa ganamaa mitis'' jedhaniiru.
Manneen barnootaa keessatti ijoollee fedha kanaaf saaxiluufi filachuun akka jiruufi odeeffannoon dharaa namni miira akkasii waliin dhalatu akka jiru jiraachuus aanga'aan kun himan.
Bara 2014'tti Pireezidant Museeveniin seera "Kill the Gays" jedhu akka ragga'u mallattesanii kan ture ta'uus manni murtii heeraa biyyattii ulaagaa mana maree bakka bu'oota uummataan barbaachisu osoo hin guutuun darbe jechuun kuffiseera.
Seerri haaraan kun torbee dhufu paarlaamaa biyyattiif dhiyaachuuf akkasumas deeggarsa pireezidantii fi miseensota paarlaamaa qabaachuus Lookod himaniiru.
'Oromoon lafa abbaasaarratti kadhatee jiraachuufi bulchuu hin qabaatu'
Sagalee deeggarsaa seera ta'u isa taasisu argata abdii jedhus qabu.
''Miseensota paarlaamaa waliin haasofneerraa, kakaasaas turre, hedduun isaanii ni deeggaru.''
Waggaa shan dura biyyoonni lixaa dhimmuma kana irratti Yugaandaatti dallanuun kenninsa viizaa fi deeggarsa irratti dhorkaa kaahanii turan.
Lokoodoon ammas murtee kanaan dhibbaa irratti dhufuu maluuf qaphaa'us himan.
Kanneen ''bajatarratti hojjetana aarsuu mala garuu aadaa ormaaf hin jilbeeffannu'' jedhan.
Quuqamtoootni mirga namoomaa biyyattii adeemsa kana qeeqaa jiru.
Boobii Waayin: 'Loltoonni qaamakoo tokkollee hin hambifne'
4 Fuulbana 2018
Shaakiil Afriidii: Osaamaa Bilaadan argachuuf hakiima CIA gargaare